Trivia Crack APK Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အသေးအဖွဲ Crack
အသေးအဖွဲ Crack APK ကို
★★★★★ကို Google Play ရဲ့အများဆုံးဒေါင်းလုတ်လုပ် trivia ဂိမ်းမှာအက်ကွဲကိုယူသွားပါ!
ပျော်စရာယေဘုယျ trivia မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းသည်သင်၏ပဟေဠိဂိမ်းတက်အဆင့်!
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူမတ်ေတာသဂိမ်း? ပျော်စရာ trivia မေးခွန်းများမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုစိန်ခေါ်မယ်! သငျသညျအသေးအဖွဲမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းအားဖြင့်, ဒါပေမယ့်ဒီပဟေဠိ app ထဲမှာမျိုးစုံ-ရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများကိုအကြံပြုခြင်းအားဖြင့်မဟုတ်မှသာထူးချွန်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြ။
သငျသညျကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး trivia app ကိုနှင့်အတူသစ်ကိုပျော်စရာနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များလေ့လာသင်ယူနေစဉ်အတွင်းသင်မည်မျှလိမ္မာပါးနပ်ကမ္ဘာပေါ်မှာပြပါ။ ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိများအတွက်အကောင်းဆုံးဂိမ်း၏ကြယ်ပွင့်စေသတည်း
•လမ်းခရီးစဉ်များအတွက်အလုံအလောက် trivia မရနိုင်သလား? Tito အားလုံးသင့်ရဲ့လမ်းခရီးစဉ် trivia လိုအပ်ချက်များအတွက်သူ၏လောက-class ကိုပထဝီဝင်အသိပညာဝေမျှပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ Batman လို့ခေါ်တဲ့မြို့သည့်တိုင်းပြည်ခန့်မှန်းနိုင်ပါသလား?
•အဲလ်ဘတ်ကသိပ္ပံမှကြွလာသောအခါကောင်လေးကိုသွားဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအကောင်း trivia မေးခွန်းများကိုချစ်ကြလျှင်, သူကသင်္ချာ, ဓာတုဗေဒ, ရူပဗေဒနှင့်ပင်နည်းပညာပေါ်တွင်သင်မေးခွန်းတွေထုတ်ခဲ့နိုငျပါသညျ!
• Hector ခေတ်ကာလအားဖြင့်သင်တို့၏ဂုဏ်အသရေကိုခုခံကာကွယ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦး duel ၌သင်တို့၏ပြိုင်ဘက်မှောက်လှန်တတ်ကြ၏အားဖြင့်သမိုင်း၌သင်တို့၏အမှတ်အသားလုပ်ပါ။
•သင် MVP trivia အားကစားပစ္စည်းမှန်သလော Bonzo အားကစား trivia နှင့်အတူလာမည့်ရာသီများအတွက်ပုံသဏ္ဍာန်၌သင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်စေနိုငျပါသညျ!
•သင်တစ်ဦး Van Gogh နှင့်ငွေရှာခြင်းအကြားခြားနားချက်ကိုပြောပြနိုင်မလား? Tina အနုပညာသင့်ရဲ့အသိပညာစမ်းသပ်ရန်ကြပါစို့။
•လုယူသောသူသတိပေးချက်! Pop ဂီတဖျော်ဖြေမှုဆက်စပ်ဘာမှပေါ်ပျော်စရာ trivia မေးခွန်းများကိုနှင့်အတူယနေ့အထိသင်တက်စောင့်ရှောက်မည်။ ဂိမ်းတွေကက, ရုပ်ရှင်နှင့်ဂီတ, တီဗီရှိုးဖြတ်ပြီးနောက်ဆုံးပေါ်ပေါ့ပ် trivia သင့်ရဲ့အသိပညာသက်သေပြ။
မည်သည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ရပ်မှန်များကိုသိပါသလား သငျသညျအဖြေကိုအတူ trivia မေးခွန်းများကိုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်ဖန်ဆင်းနေတဲ့အဘယ်အရာကိုအခြားအသုံးပြုသူများပြပါ။
နည်းပါးလာလွယ်ကူသော trivia မေးခွန်းများကိုနှင့်ပိုပြီးစိန်ခေါ်မှုမေးခွန်းများကိုစေချင်သလား? သင်ကသူဌေးနေပါပြီ! အခြားအသုံးပြုသူများ၏လုပ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မေးခွန်းများကိုအားဖြင့်ဂိမ်းထဲသို့အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်နှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။
1 ။ ဘီးလည်: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြောက်လအမျိုးအစားများထဲမှပေါ်တွင်သင်မေးခွန်းတွေထုတ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏အလှည့်လက်လွတ်မဒါမှန်ကန်စွာဖြေပါ!
2 ။ အဆိုပါသရဖူ gauge ဖြည့်ပါ: အကို Crown အပိုင်းပေါ်တွင်ဘီးလေယာဉ်ဆင်းသက်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦးဇာတ်ကောင် Get, ဒါမှမဟုတ်မှန်ကန်စွာသုံးမေးခွန်းများကိုဖြေပါ။
3 ။ ဇာတ်ကောင်စုဆောင်း: မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့ထဲကတစ်ခုလုဖို့ duel ရန်သင့်ပြိုင်ဘက်ကိုစိန်ခေါ်နေဖြင့်သူတို့ကိုအနိုင်ရမည်ဟု! အဆိုပါပွဲစဉ်ကိုအနိုင်ရအားလုံးကိုခြောက်လဇာတ်ကောင်ရယူပါ!
သည်အခြား features တွေ!
•ယနေ့ထက်ပို trivia လိုအပ်ပါသလား? သင့်ရဲ့လောင်းနှင့်တစ်ဦးကို real-time ၌သင်တို့၏ပြိုင်ဘက်နှင့်အတူဆော့ကစားရန်အသေးအဖွဲ Rush သွားရောက်ကြည့်ရှုနေ့စဉ် trivia မေးခွန်းများကိုစိန်ခေါ်မှု။ ဒါပေမယ့်ပတ်ပတ်လည်ကပ်, အပတ်တိုင်းပြိုင်ပွဲများရှိပဲ!
•မေးခွန်းများကို non-stop ဖြေဆိုနှင့်သင့် High-ရမှတ်ရိုက်ပုတ်လူပျို Player ကို Mode ကို Play ။ အဘယ်သူမျှမလှည့်မရှိ, စောင့်, သင့်ကိုယ်ပိုင်နှုန်းထားမှာတစ်နေ့တာ trivia ပျော်မွေ့!
•တစ်ဦးရတနာ Hunt ကအပေါ် Go! မြေပုံမှတဆင့်တိုးနှင့်အံ့သြဖွယ်ဆုတက်တူးဖို့အဖြေကိုစုဆောင်း!
•အဆင့်သင့်ရဲ့ပဟေဠိဂိမ်း Check နှင့်သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုထက်ပိုမိုမှန်ကန်သောအဖြေကိုရဖို့ဒါမှမဟုတ်အိမ်၏အစစ်အမှန်မိသားစု trivia ခေါင်းကိုဖွင့်တဲ့သူကိုကြည့်ရှုနိုင်လျှင်ကြည့်ပါ! အသေးအဖွဲ Crack လူကြီးများနှင့်လေးတွေများအတွက်ပျော်စရာ trivia မေးခွန်းများကိုအဘို့ကြီးသော trivia မေးခွန်းများကိုအတူအားလုံးအသက်အရွယ်များအတွက်ပျော်စရာ, ပါ!
•သူငယ်ချင်းမိသားစုသို့မဟုတ်ကျပန်းပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ Chat ။
ပါဝါ ups နှင့်အတူအပိုအစွန်းရရှိ
•သင်မှန်န်းကျင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မေးခွန်းရလိမ့်မယ်မထင်သလား? အခြားသို့ သွား. မရရန်နှစ်ချက်အခွင့်အလမ်းကိုအသုံး, မစိုးရိမ်ပါနဲ့။
•အရမ်းခက်ခဲသေးအဖွဲလိုက်စားမေးခွန်းများကို? လာမယ့်တဦးတည်းသွား Skip ကိုသုံးပါ။
ယခု trivia များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်း Download!
အပြည့်အဝ trivia 360 ဒီဂရီအတွေ့အကြုံကိုစေချင်သလား? အကြှနျုပျတို့ကိုက Follow:
- Facebook ကို: https://www.facebook.com/triviacrack
- တွစ်တာ: @triviacrack
- Instagram ကို: https://instagram.com/triviacrack
- YouTube ကို: https://www.youtube.com/c/TriviaCrackOfficial
- က Google+: https://plus.google.com/+TriviaCrackOfficial/
◉အသုံးပြုသူ interface ကိုတိုးတက်မှု
◉ Bug ပြုပြင်မှုများ
60.42 ကို MB
အသေးအဖွဲ Crack နိုင်ငံ